Namuhla e-izitolo ithengiswe amakhulu amamodeli we izinyawo ngeketanga. Ukuze ukwazi ukubona lapho yensimbi iyona engcono, ake sibheke amathuba yalezi amadivaysi kagesi.
Ake uqale nge ematheni. yensimbi Electric ungase ube ematheni aluminium, ngobumba, cermet, titanium, Teflon, insimbi engagqwali.
Aluminium soleplate heats ngokushesha, kodwa akanawo amandla. Ngokuhamba kwesikhathi, lokhu yedwa kokuvela imihuzuko kanye uhlevane, okonakalisa indwangu.
Outsole ne Teflon enamathela okuhlala isikhathi eside, awusebenzi unamathele nama-slide kahle. Lapho ukufuthelana Teflon iba ezithambile futhi kulula ekuqaleni ku izinkinobho zensimbi noma inyoka. Imidwebo ku Teflon ke ibe hangnails.
Ukubumba phezu soleplate heats ngokushesha, sehla kahle ngaphandle eguqa izinto futhi kulula ukuhlanza. Ukubumba has ethile sina - ke ulula.
Cermet enamathela anazo zonke izinzuzo luthi alufane Ceramic, kodwa okuhlala isikhathi eside.
Insimbi engagqwali kuyinto outsole eqinile futhi isikhathi eside. Kahle iphucuziwe amaslayidi steel kahle ngale ndaba.
Titanium enamathela yedwa eyizingqabavu kakhulu futhi isikhathi eside. Titanium kuyinto amaslayidi ezinhle ku-ezicutshini zomzimba.
Kuyinto yensimbi engcono okufanele abe yedwa wamboza titanium, insimbi engagqwali noma metal-Ceramic.
Eyesibili isici esibalulekile insimbi - amandla. Ngezinye amandla okusezingeni eliphezulu ngokushesha ke heats bese edonsa intuthu yensimbi. Irons amandla afinyelela ku-1500 Watts Site amafulethi nge wiring ababuthakathaka kagesi. Irons umthamo kusuka 1 600 kuya ku-1 900 Watts ngempela aneliseke imindeni amancane. Uma umndeni sabantu abangaphezu kuka emithathu ayina kuthatha amahora ambalwa isonto ngalinye, udinga yensimbi umthamo kusuka 2000 kuya 2400 Watts. Ikhishwe futhi ngakhula amandla ezinsimbini ukuthi kudle kusuka 2400 Watts.
The best Iron - kudivayisi umthamo kusuka 2000 kuya 2400 Watts. Lezi nemingcele ukunikeza Ukushisa okusheshayo, umusi isizukulwane bese unika amandla ukusetshenziswa ngesikhathi esisodwa kwamanye amadivaysi, ngaphandle kokudala inethiwekhi ukuminyana.
I yensimbi engcono kufanele abe othomathikhi livaleke-off umsebenzi. Kudivayisi iyazivala ngemuva kwemizuzwana 30 sokungasebenzi ngesikhathi ovundlile noma ngemva kwemizuzu engu-10 kokuhlala yokwenziwa uqotho.
A yensimbi ezinhle kufanele abe umsebenzi umusi umfutho. Lena ekuqhumeni kakhulu umusi ngokusebenzisa soleplate ngoba crease ukususwa noma izingubo phezu-ezomile.
Amaconsi iwe ukuthi kusukela lensimbi Indwangu, okubangela amabala. Esikhathini ezinsimbini engcono yokusebenza uhlelo, ekuvimbeleni ukwakheka amaconsi. Ukukhululwa njalo umusi uhlelo cishe zonke izinyawo ngeketanga.
I yensimbi kumele ngempela ihlinzekwe self yokuhlanza kukho lapho ekamelweni, ngentukuthelo is bahlanza ebhuqwini ukugqwala eqinile umusi jet. I ezinsimbini engcono anemisila antiscale. izinhlelo ezinjalo ukuhlinzekela ukusetshenziswa opholile esikhiphekayo noma izinduku.
Esikhathini ezinsimbini arcade esetshenziswa ibhola isokhethi intambo yamandla. Nale ukhweze ikhebula kagesi akuyona osontekile base futhi khulula ukujikisa 360.
Kulesi ukubuyekeza, kuhlu kuphela isethi ubuncane izici agcwele yensimbi engcono. Lapho ekhetha kwedivayisi kwamanethiwekhi ayina, khumbula ukuthi udinga okusansimbi, hhayi computer, elikwaziyo yensimbi. Phela, lula - isihluthulelo nokwethenjelwa.
Iinsetjenziswa zokukhwela okwenza donuts. Ukubuyekeza Market impendulo ku abakhiqizi
Regio slide wokudlala: ukubuyekezwa, izincazelo, imininingwane, ukubuyekezwa, intengo
Abilisiwe ubisi irayisi. Recipe ukulungiselela nokuningi
Umculi German nama- Golbeyn (Encane): Biography, lokusungula
Amacansi Sikhungo ngezandla
Element ngenela ngezandla zabo
Kungani kufanele ukhethe isithuthuthu nezigqoko Yema
LCD "Mirax Park": ikheli, incazelo, ukubuyekezwa